Xisbiyada iyo Bulshada Diyaar Ma u yihiin Doorashada 2020? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Farax Xasan Macallin, March 4, 2019
Qaabka Shahwada Loo Qaado – Goormaa Qofka Shahwadiisa La Baari Karaa?
Jebriil Maxamed Domenico — December 15, 2019
Doorashadu waxaa loo arkaa in ay tahay tiir kamid ah dimuqraadiyadda, iyo dawlad wanaaga, taageeradda beesha caalamka ee Soomaaliya waxay qorsheeyeen 2020 in dalka uu galo doorasho qof iyo cod ah, si loo hubiyo dimuqraadiyeeynta iyo dib-u-dhiska dalka.
Guddiga madaxbanaan ee u xil saaran qabanqaabada doorashooyinka ayaa qaaday tallaabooyin lagu hubinayo suurtagalnimada Doorashada, sida Diiwangelinta xisbiyada. Ilaa haddana waxaa diiwangeshan in kabadan 57 Xisbi, sida ku cad bogga Guddiga.
Aqoonyahanada badanaa ayaa isweeydiiya suurtagelinimada doorashadaan iyagoo markaas u arka tallaabooyinkan guddigu qaaday in aysan hubin karin doorasho xor iyo xalaal ah, islamarkaasna ka hadlay saameeynta doorashada ay ku yeelan karto qeeybaha kale duwan ee bulshada.
Sida ku cad bogga taariikhda Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay waxaa wax dooran jiray xubnaha baarlamaanka, iyadoo sidas ay jirtana dadku markaste waxay ukala qeeybsanaayeen hogaamiyaasha markas tartamaya, doorashada soo socotana haddii qof iyo cod ay noqoto, dareenka bulshada siduu noqon doona? run ahaantii wuxuu abuuri doona rabshado iyo kala qeeybsanaan baahsan.” Ayuu yiri macalin ka faallooda arrimaha doorashooyinka.
Tartanka ay ku jiraan xisbiyada (Doorasho) ma mideyn doonaa bulshada oo dhibaatooyinkooda ma xallin doona?
Shaki iyo walaac badan ayey aqoonyahanada muujiyaan markii su’aashas timaado, Sababtoo ah iyadoo aan la socono in xisbiyadu yihiin kuwa ku dhisan nidaam beeleed way adagtahay in ay tartan u galaan doorasho loogu talagalay dad ku mideeysan aragtiyo kale duwan, waxaase kaloo kasii muhiimsan oo laga yaaba in xubnaha xisbiga ay yihiin dad hoosjooge u ah hogaamiyaha xisbigas, ama uu xisbigu yahay Shirkad dad gaar ahi ay leeyihiin.
Siduu dalku doorasho ku gali karaa marka xisbiyadu ay ukala qeeybsanyihiin beelo kale duwan?
Ree galbeedka ayaa sheega in arrintan ay dhalinkarto waxa loo yaqaano competitive politics, sababtoo ah doorashadu waxay noqonaysa aalad tartan ku dhex abuurta bulshada, madaama dadka codeeynaya ay yihiin dad qabaa’iil ukala qeeybsan, xisbiyada jira midkood oo guuleeystana waxay ka dhigantahay qeeyb kamid ah bulshada oo guuleeystay, halka qeeybta kale-na ay ku hamiyaan in maalin un xisbigooda talada la wareegi doono.
Doorashadu sidee bay ku dhisi kartaa dawladd ku dhisan awoodda shicibka marka run ahaantii uu tartankan sii kala qeeybinayo bulshada?
Bulsho dhinac walba ka dhibaateeysan sidee bay ku dhisi kartaa nidaam dimuqraadi ah oo waliba gadaal kasoo riixaya dad bulshadoodu barwaaqeeysan yihiin?
Fahan darrida doorashada ay bulshada inteeda badan ay ka qabaan ayaa ah in doorashadu dhisayso nidaam ku saleysan caddaalad iyo sinnaan, intaasna waxaa usii dheer waxay ku andacoonayan in nidaamka 4.5 ee beeledka uu meesha ka bixi doona, si haddii loo fiiriyo arrintan waa sax se waxaa kasii muhiimsan dadka ma isu aqoonsadaan qaab shaqsiyeed ama wali nidaamka 4.5 baa aqoonsi u ah? Run ahaantii aqoonyahanada walaac fara badan ayeey ka muujiyeen arrinkas, ee akhristoow adiga sidee kula tahay?
Doorasho xor iyo xalaal ah-na in la qabtaa waxa ka ahmiyad weyn in xal loo hela dhibaatooyinka heeysta bulshada, aqoonyahanada-na badanaa waxay soo jeediyaan in marka hore bulshadu la mideeyo iyagoo loo muujinayo dhibaatooyinka heeysta in ay ku xallismi karaan awoodd mideeysan ee ka timaada dhankooda.
Tags: Xisbiyada iyo Bulshada Diyaar Ma u yihiin Doorashada 2020?
Next post Sabanka Qaranjabka?
Previous post Maxaad Ka Taqanaa Cudurada Laga Qaaddo Qabowga?